Izaho dia Finalist an'ny I-Prize an'ny Cisco - Azafady tohano ny hevitray | Martech Zone
Zoma, Aprily 4, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Matetika dia tsy misy toa izao ny fotoana iray - vintana ahazoana $ 250,000 ary hiara-miasa amin'ny orinasa toa azy Cisco hahatonga ny hevitrao ho lasa tena izy!
Alohan'ny hamakianao azy dia azonay ampiasaina ny fanohananao. Na dia tafakatra amin'ny famaranana aza ny fampiharana antsika, dia somary maivana ihany ny fahitanay ny vato. Raha mbola misokatra ny fifidianana, dia ho faly izahay raha hisoratra anarana sy hifidy ho anay:
Misoratra anarana amin'ny tranokala I-Prize an'ny Cisco
Midira ary kitiho ny "Promote" amin'ny hevitra SaaS POS.
Inona ny I-Prize?
Tsindrio ny Cisco I-loka Video
Efa ela aho no niasa tao amin'ny sehatry ny Restaurant mba hahatsapako fa ny iray amin'ireo olana lehibe atrehan'ny Restaurateurs dia ny fahaizana mahita sy mampiasa teknolojia mora sy lafo. Lazaina ny marina, fahagola ny indostria… Ny rafitra Point of Sales dia handoa mihoatra ny 10% amin'ny vidin'ny fanombohan'ny orinasa ary voafetra mafy ny fahaizan'ny rafitra.
Ny orinasa iasako miasa amin'izao fotoana izao dia mpitarika amin'ny fampidirana ny Internet Ordering amin'ny rafitra POS. Fanamby tsy mampino anefa izany. Ny rafitra POS, farafaharatsiny, folo taona aorian'ny teknolojia ary tsy vonona tanteraka amin'ny ecommerce amin'ny alàlan'ny tranonkala. Raha tokony hanokatra ny rafitr'izy ireo amin'ny fampidirana an-tserasera izy ireo dia mitaky fandaniana lisansa fanampiny miaraka amina endrika tsy azo atokisana sy tsy feno ireo orinasa POS ankehitriny, ka miteraka aretin'andoha ho an'ireo orinasa toa ahy ary koa ny restaurateur.
Raha nifindra tao amin'ny lozisialy ho toy ny serivisy ny rindranasa birao, ny rindranasa mailaka ary ny rafi-pitantanana fifandraisana amin'ny mpanjifa, tsy mbola nisy ny rafitra POS ary fotoana lehibe anararaotana izany ankehitriny ny fisian'ny orinasa maro kokoa mandray an-tanana vahaolana amin'ny fampiantranoana. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, namoaka ny hevitro tamin'ny tranokalan'ny Cisco, ny SaaS pos. Ny hevitra dia ny maka ny rindrambaiko POS amin'izao fotoana izao ary mihazakazaka amin'ny Internet fa tsy avy amin'ny fitaovana POS.
Betsaka ny tombony - lasa tsy mitombina ny fampidirana amin'ny Online Ordering. Ary koa, misy ny fotoana vaovao misongadina, toy ny karama, ny banky, ny fampidirana mailaka amin'ny mailaka, ny fampidirana finday, eny fa na ny famatsiana vokatra (lany ny salmon dia miteraka fanairana mangataka amin'ny mpitantana handidy bebe kokoa. Manaiky izy ary alefa amin'ny alàlan'ny elektronika ilay baiko).
Tena nanome antsika fotoana mahavariana eto i Cisco eto ary tiako ny hahita ilay hevitra tonga vokany. Tsy mino aho fa misy orinasa mety kokoa hanampy amin'ny fampivoarana sy fampidirana hevitra toy izao amin'ny tsena. Ny fotodrafitrasa ilaina amin'ny tambajotra, ny fiarovana, ny teknolojia mpanjifa manify… ireo no tanjaky ny Cisco!
Araho maso hatrany Bilaogin'ny Cisco I-Prize raha mila fanazavana fanampiny.
Ary aza adino ny mampiroborobo ny hevitsika !!! Ny ekipa dia misy ahy, Bill Dawson, Carla Ybarra-Dawson ary Jason Carr.
Tags: Ciscocisco i-lokacipo iprize
Apr 4, 2008 ao amin'ny 6: PM PM
Miarahaba anao Doug!
Tsindrio ny Promote! Manantena aho fa handeha.
Misaotra betsaka amin'ny fanohananao, Shawn! Heveriko fa manana fampiharana azo tanterahina isika miaraka amina fotoana maro hanovana ny tontolo iainana. Toa tsy dia nahasarika fifantohana firy tany ivelan'ny mpitsara izahay, na izany aza, ka manandrana mampihetsi-po.
Mankasitraka ny anao izahay!
Apr 5, 2008 amin'ny 8: 55 AM
Nandany ny 10 minitra farany teo aho nanandrana namorona kaonty tamin'io tranonkala io ary nifidy anao. Raha vantany vao nandalo ny fepetra adalana momba ny teny miafina aho dia nahazo ny efijery fahadisoana ASP foana rehefa nanandrana nanolotra.
Hiezaka indray aho avy eo ary antenaina fa afaka miditra! Miala tsiny!
Apr 5, 2008 amin'ny 9: 13 AM
Heveriko koa fa tsara ilay hevitra. Intuit dia nanao izany tamin'ny rindrambaiko fitantanana kaonty taona roa lasa izay ary fitaovana tsara ho an'ny trano fisakafoanana izy io.
Mampalahelo fa heveriko fa tsy ianao no voalohany mandroso hevitra toy izany. Fantatro fa misy orinasa roa miasa amin'ny foto-kevitra ankehitriny. Hifidy anao anefa aho. Mihoatra lavitra ny rafi-pisakafoanana POS mitambatra ny hery sy ny enti-miasa ao amin'ny Cisco!
Apr 5, 2008 amin'ny 11: 05 AM
Toa zavatra mbola mila fampiasa eo amin'ny lafiny client, angamba amin'ny fampiasana Adobe AIR? Sa ve tsy ho Cisco-ish ampy izany?
Apr 5, 2008 amin'ny 11: 16 AM
Mike - marina ny resakao, ny fivarotana angona eo an-toerana dia tsy maintsy ilaina raha sendra tapaka ny fifandraisana. Ny AIR no tena aingam-panahy tamin'ny fanapahana hevitra raha azo inoana izany na tsia. Azo antoka fa hanao ny fikafika ny AIR, fa raha mandroso client mahia kosa ny Cisco dia mety hiasa koa izany!
Apr 6, 2008 amin'ny 3: 42 AM
Tsara izany - mirary soa. Rehefa mandresy ianao dia mila resadresaka ho an'ny tranokalako 😉